बाइडेनले अष्ट्रेलिया, जापान र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई किन बोलाए ह्वाइट हाउस ? — Sanchar Kendra
बाइडेनले अष्ट्रेलिया, जापान र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई किन बोलाए ह्वाइट हाउस ?
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जापान, अष्ट्रेलिया र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता जेन साकीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आउँदो सेप्टेम्बर २४ मा बाइडेनले अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, जापानका सुगा योसिहिदे र भारतका नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा भेट्न लागेका हुन्।
अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षासहित अन्य विषयमा सहकार्य गर्न क्वाड भनिने क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग बनाएका छन्। साउथ चाइना सी, दक्षिण पूर्वी एसियालगायत यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न क्वाडले काम गर्छ।
‘क्वाडका नेताहरूलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्नुले बाइडेन-ह्यारिस प्रशासनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता दर्शाउँछ, साथै २१ औं शताब्दीका चुनौतीलाई नयाँ बहुपक्षीयताका माध्यमबाट सामना गर्न लागेको पनि देखाउँछ।
,’ प्रवक्ता साकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘क्वाडका नेताहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने, कोभिड-१९ नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, नयाँ प्रविधि र साइबर स्पेशमा सहकार्य र खुला र स्वतन्त्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने छन्। क्वाडका नेताहरू पहिलो पटक भौतिक रूपमा भेट्न लागेका हुन्। यसअघि गत मार्चमा क्वाडको भर्चुअल सम्मेलन भएको थियो।
त्यस्तै बाइडनका उत्तर कोरियाली दूत सुङ किमले वार्ताको लागि ढोका खुला रहेको बताएका छन् । उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेसँगै अमेरिकी दूतले यस्तो बताएका हुन् । टोकियोमा जापान र दक्षिण कोरियाली अधिकारीसँगको वार्ताको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले उत्तर कोरियाप्रति अमेरिकाको कुनै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार नरहेको बताएका छन् । तीन मुलुकका राजदूतले उत्तर कोरियालाई पुनः वार्तामा ल्याउनुपर्ने विषयमा चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै अहिले खाद्य संकटसँग जुधिरहेको उत्तर कोरियालाई मानवीय सहायता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई वर्षअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग वार्ताको प्रयास गरेका थिए । यद्यपि यो वार्तामा सफलता भने मिलेन । आइतबार उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्रुज मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो । उत्तर कोरियाले यसअघि जो बाइडनले राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको थियो ।